देश सं’कटकाल हुँदै गृ’हयुद्धतर्फ जाँदैछः डा. सुरेन्द्र केसी – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारदेश सं’कटकाल हुँदै गृ’हयुद्धतर्फ जाँदैछः डा. सुरेन्द्र केसी
देश सं’कटकाल हुँदै गृ’हयुद्धतर्फ जाँदैछः डा. सुरेन्द्र केसी
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले सर्वोच्च अदालतले संसद बि’घटन गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क’दमलाई सदर नगरे देश सं’कटकालमा हुँदै गृ’हयुद्धमा जानसक्ने ख’तरा औल्याएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले देशलाई झन् ख’तरनाक भ’ड्कालोमा हाल्ने गतिविधिहरु भइरहेको बताए ।उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले संसद बि’घटनलाई स’दर गरेन भने देश सं’कटकालमा जान्छ र त्यसपछि गृ’हयुद्ध हुन्छ ।’ ओलीको क’दम असंवैधानिक भएपनि विगतमा बामदेव गौतम प्रकरणमा अदालतले उनको पक्षमा गरेको फै’सला अनुसार बढेमा संसद बि’घटनलाई स’दर गर्ने विश्लेषण गरे ।
देशमा लोकतन्त्र नभई लु’टतन्त्र मच्चिइरहेको तर्क गरे । अहिलेको विकसित घ’टनाक्रमले देशलाई सि’ध्याउन चाहनेलाई फाइदा पुगेको बताए । उनले भने,‘देशमा ग’म्भीर सं’कट बढ्दैछ, जनता तत्काल जा’ग्नुपर्छ र यी नेताहरुलाई द’ण्डित गर्नुपर्छ ।’ देश सिक्किमिकरणतर्फ बढेको भन्दै देश नै रहने हो होइन भन्ने अवस्था सृजना भएको बताए ।डा. केसीले भने,‘अब यो देश रहने छैन, रह्यो भने पनि धान्न सक्नेछैनौं ।’ नेताहरुले यो ख’तराको बेवास्ता गरेको बताए । डा. सुरेन्द्र केसीले देशमा अहिलेको नेताहरु असफल भइसकेकाले नयाँ विचार र नयाँ अनुहार आउनुपर्ने बताए ।
ओली र प्रचण्डको मिलन हुँनु नै अन्त हुनु हो भने । केसीले भने,‘अब नेकपा एक हुनै सक्देन ।’ देशमा ओली र प्रचण्ड दुवैले पार्टी हाँक्न खोज्दा सं’कट आएको बताए । प्रधानमन्त्रीको सि’फारिशलाई अदालतले कसरी हेर्छ ? बामदेवको पक्षमा फै’सला गरेको स्मरण गराउँदै अदालतले यही शैलीमा बढे सिफारिशलाई स’दर गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिश ब’दरभागी छ भन्दै बामदेवको प्र’करण हेर्दा ब’दरभागी नहुने बताए ।